1 Samueri 16 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Bhuku Rekutanga raSamueri 16:1-23
Samueri anozodza Dhavhidhi kuti azova mambo (1-13)
“Jehovha anoona zviri mumwoyo” (7)
Mweya waMwari unobviswa pana Sauro (14-17)
Dhavhidhi anotanga kuridzira Sauro rudimbwa (18-23)
16 Jehovha akazoti kuna Samueri: “Ucharamba uchinetseka pamusoro paSauro+ kusvikira riini ini ndamuramba kuti ave mambo weIsraeri?+ Zadza nyanga yako nemafuta+ uende. Ndichakutuma kuna Jese+ wekuBhetrehema, nekuti ndasarudza mambo pavanakomana vake.”+ 2 Asi Samueri akati: “Ndingaenda sei? Kana Sauro akanzwa nezvazvo achandiuraya.”+ Jehovha akapindura kuti: “Tora tsiru uende naro wobva wati, ‘Ndauya kuzobayira kuna Jehovha.’ 3 Shevedza Jese kuti auye kuchibayiro chacho; uye ndichabva ndakuudza zvekuita. Unofanira kundizodzera munhu wandichakusarudzira.”+ 4 Samueri akaita zvakataurwa naJehovha. Paakasvika kuBhetrehema,+ vakuru veguta vakadedera pavakasangana naye, uye vakati: “Kwakanaka here zvamauya kuno?” 5 Iye akabva ati: “Kwakanaka. Ndauya kuzobayira kuna Jehovha. Zvitsvenesei tiende tese kuchibayiro chacho.” Akabva atsvenesa Jese nevanakomana vake, achibva avashevedza kuchibayiro chacho. 6 Pavaipinda panzvimbo yaibayirwa, akaona Eriyabhi+ achibva ati: “Chokwadi uyu ndiye muzodziwa waJehovha akamira pamberi pake.” 7 Asi Jehovha akati kuna Samueri: “Usatarisa chimiro chake nekureba kwake,+ nekuti haasi iye wandasarudza. Nekuti maonero anoita munhu haasi iwo maonero anoita Mwari, nekuti munhu anoona zvinooneka nemaziso, asi Jehovha anoona zviri mumwoyo.”+ 8 Jese akabva ashevedza Abhinadhabhi+ akaita kuti apfuure nepamberi paSamueri, asi iye akati: “Jehovha haanawo kusarudza uyu.” 9 Jese akazoita kuti Shamaa+ auye, asi iye akati: “Jehovha haanawo kusarudza uyu.” 10 Saka Jese akaita kuti vanakomana vake 7 vapfuure nepamberi paSamueri, asi Samueri akati kuna Jese: “Jehovha haana waasarudza pane ava.” 11 Samueri akazoti kuna Jese: “Ndivo vanakomana vako vese here ava?” Iye akabva ati: “Mudiki wacho+ haana kushevedzwa; ari kufudza makwai.”+ Samueri akabva ati kuna Jese: “Ita kuti anoshevedzwa, nekuti hatisi kuzogara pasi kuti tidye kusvikira auya pano.” 12 Saka akaita kuti anoshevedzwa uye akabva auya. Akanga ari mutsvuku, aine maziso akanaka, aine chimiro chakanaka.+ Jehovha akabva ati: “Simuka umuzodze, nekuti uyu ndiye munhu wacho!”+ 13 Saka Samueri akatora nyanga yemafuta,+ akamuzodza vakoma vake varipo. Mweya waJehovha wakatanga kupa Dhavhidhi simba kubva pazuva iroro zvichienda mberi.+ Gare gare Samueri akasimuka, akaenda kuRama.+ 14 Mweya waJehovha wakanga wabva pana Sauro,+ uye mweya wakaipa waibva kuna Jehovha waimutambudza.+ 15 Varanda vaSauro vakati kwaari: “Onai, mweya wakaipa unobva kuna Mwari uri kukutambudzai. 16 Tapota, ishe wedu ngaarayire varanda venyu vari pamberi penyu kuti vatsvage munhu ane unyanzvi hwekuridza rudimbwa.+ Pese panouya mweya wakaipa unobva kuna Mwari pamuri, iye acharidza rudimbwa, uye muchanzwa zviri nani.” 17 Saka Sauro akati kuvaranda vake: “Ndapota, nditsvagirei munhu anoridza zvakanaka, muuye naye kwandiri.” 18 Mumwe wevaranda vacho akati: “Ndakaona kuti mumwe mwanakomana waJese wekuBhetrehema anoridza neunyanzvi, uye murwi akashinga ane simba.+ Anotaura zvakanaka, uye ane chiso chakanaka,+ uye Jehovha anaye.”+ 19 Sauro akabva atuma nhume kuna Jese akati: “Nditumire Dhavhidhi mwanakomana wako ari kumakwai.”+ 20 Saka Jese akatora dhongi akaritakudza chingwa, nehomwe yedehwe yewaini, nembudzi diki, akazvitumira nemwanakomana wake Dhavhidhi kuna Sauro. 21 Dhavhidhi akasvika kuna Sauro akatanga kumushandira.+ Sauro akatanga kumuda kwazvo, uye akava mutakuri wezvombo zvake. 22 Sauro akatumira shoko kuna Jese, achiti: “Ndapota, Dhavhidhi ngaarambe achindishandira, nekuti ndamufarira.” 23 Mweya wakaipa waibva kuna Mwari pawaiuya pana Sauro, Dhavhidhi aitora rudimbwa oridza, uye Sauro aizorodzwa onzwa zviri nani, uye mweya wakaipa waibva paari.+
1 Samueri 16